ဒူဒူကြီး: December 2012
Check valve - hydraulic system အတွင်းမှာ ဆန့်ကျင်ဖက် opposite direction ဖြင့်စီးဝင်လာမယ့် fluid ရဲ့ free flow ကိုတားဆီးရန်အတွက်၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ check valves တွေကို poppet-type check valve နဲ့ pilot-operated check valve ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ 'pilot-operated check valves' တွေ အတွင်းသို့၊ external source တခုခုမှ fluid ကို reverse flow အနေနဲ့ပေးသွင်းပြီး၊ မူလစီးဆင်းနေတဲ့ valve ရဲ့ inlet ရှိ၊ free-flow ကို၊ လိုအပ်သလို ဆက်လက် စီးဆင်းစေနိုင်သလို၊ လိုအပ်သလိုရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ ( Originally Posted by ကိုထွန်း )
Fig. Pilot operated check valves
directional valves တွေအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောဖို့ pilot-operated တွဲဖက်အသုံးပြုရမယ့် check valves တွေအကြောင်းမှ၊ အစတည်ခဲ့တယ်လို့ 'ဒူဒူ' နည်းလည်မိပါတယ်။ ဦးကြီးကိုယ်စား "ဒူဒူ" တယောက်၊ ဆက်ကာ 'ပွား' ပါရစေ။ pilot-operated check valves တွေကို၊ pilot-to-open check valve နဲ့ pilot-to-close check valve ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားကြပါသတဲ့။ pilot operated ရယ်လို့ သုံးနှုံးရခြင်းကတော့ valve ရဲ့ အဖွင့်နဲ့အပိတ် open and close ကိစ္စတွေကို၊ external pilot supply ဆိုတဲ့ valve ရဲ့ outlet မှ fluid reverse flow တခုကို၊ valve သို့ပေးသွင်းကာ၊ ဆောင်ရွက်စေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Pilot-to-open check valve - valve ရဲ့ inlet မှ free-flow port မှတဆင့် ဝင်ရောက်လာမယ့် fluid ရဲ့ pressure ဟာ၊ spring force setting pressure ကိုမကျော်လွန်သေးတဲ့အထိ၊ normally closed အနေအထားဖြင့်၊ valve 'ပိတ်' နေပြီး၊ spring force setting ထက်ကျော်လွန်သွားစဉ်မှာတော့ open အနေအထားဖြင့် 'ပွင့်' သွားပါတော့တယ်။ check valves တွေဟာ pilot piston နဲ့ steam ကိုသုံးကာ၊ အဖွင့်အပိတ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ valve တွေဖြစ်သလို၊ valve ရဲ့ အဝင်နဲ့အထွက် inlet and outlet မှ fluid flow pressure ကို equalized အနေနဲ့ ညီမျှနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ valves တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ pilot-to-open check valves တွေကို၊ တည်ဆောက်ပုံ အရ plain pilot to open, pilot to open with decompression နဲ့ pilot to open with external drain type ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Fig. Three types of pilot-to-open check valves with symbols
(Plain pilot to open, Pilot to open with decompression and Pilot to open with external drain type)
plain pilot to open check valves တွေရဲ့ pilot piston area ဟာ၊ poppet seat area ထက် (၃) ဆမှ (၄) ဆခန့်အထိ၊ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ valve ရဲ့ pilot piston ထိပ်သို့၊ external pilot supply ဆိုတဲ့ fluid မှ reverse flow တနည်းအားဖြင့် valve ရဲ့ outlet မှ fluid flow သို့မဟုတ် controlled flow ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ check valve ရဲ့ poppet မှာ seat အနေနဲ့ 'ထိုင်' နေတဲ့ pilot piston နဲ့ steam ဟာ အပေါါသို့ထပ်မံ 'ကြွ' တက်သွားပါတယ်။ pilot piston area ကြီးမားတဲ့အတွက်၊ pressurized reverse flow သက်ရောက်ရာမှ force ပိုမိုရရှိလာပါတယ်။ ပိုမိုရရှိလာတဲ့ force ကြောင့်ဖြစ်ပေါါလာတဲ့ pressure ဟာ၊ poppet ကိုတွန်းထားမယ့် valve ရဲ့ inlet ရှိ၊ free-flow port မှတဆင့် သက်ရောက်နေတဲ့ back-pressure ထက်ကျော်လွန်သွားသဖြင့်၊ poppet ရွှေ့လျှားပြီး valve ဟာ ပိုမို၊ ပွင့်သွားပါတယ်။ အချို့ plain pilot to open check valves တွေမှာ၊ အလွန်သေးငယ်တဲ့ very low pilot pressure ပမာဏသာ အသုံးပြုပြီး၊ valve ကိုထပ်မံပွင့်စေရန်၊ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက် pilot piston area နဲ့ poppet seat area တို့ရဲ့ အချိုး ratio ကို '100: 1' ခန့်ထားရှိကာ၊ တတ်ဆင် အသုံးပြုကြပါတယ်။
pilot to open with decompression type check valves တွေမှာ၊ သေးငယ်တဲ့ inner decompression poppet ကို၊ အသုံးပြုထားပါတယ်။ inner decompression poppet မှာ valve ရဲ့ outlet မှရရှိလာတဲ့၊ low pilot pressure မှတဆင့် သေးငယ်တဲ့ small flow passage တခုဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ small flow passage ကြောင့်ပေါါပေါက်လာတဲ့ သေးငယ်တဲ့ pressure ကို အသုံးပြုပြီး၊ poppet ကိုတွန်းထားမယ့် valve ရဲ့ inlet ရှိ၊ free-flow port မှတဆင့် သက်ရောက်နေတဲ့ back-pressure ကို အရင်ဆုံးလျှော့ချ ယူပါတယ်။ poppet အနည်းငယ် ရွှေ့လျှားမှုကြောင့် back-pressure ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ valve ရဲ့ outlet မှ fluid flow တနည်းအားဖြင့် controlled flow သက်ရောက်နေတဲ့ pilot piston လည်း၊ အလွယ်တကူ ရွှေ့လျှားသွားပြီး၊ poppet ကို ထပ်မံတွန်းလိုက်ရာမှ valve ဟာ fully open အနေအထားဖြင့် ပိုမို၊ ပွင့်သွားပါတယ်။ load-induced သို့မဟုတ် continuous forces တွေရှိနေမယ့် hydraulic fluid circuits တွေမှာတော့ valve ရဲ့ outlet မှ free-flow port မှာ high back-pressure အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲကာ၊ သက်ရောက်နေတဲ့အတွက်၊ pilot to open with decompression type check valve တွေကို၊ တတ်ဆင် အသုံးမပြုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
pilot-operated with external drain type check valve တွေဟာ အခြား check valves တွေနဲ့မတူပဲ၊ fluid ရဲ့ flow ကို လားရာ (၂) ဖက် by-direction ဖြင့်၊ စီးဆင်းစေနိုင်သလို၊ valve ရဲ့ inlet မှ free-flow port မှတဆင့် pilot piston ရဲ့ stem side သို့ သက်ရောက်နေတဲ့ back-pressure ကို isolate အနေနဲ့ တားဆီးပေးထားနိုင်ပါတယ်။ pilot piston ရဲ့ stem side သို့ သက်ရောက်နေတဲ့ valve ရဲ့ inlet မှ back-pressure ဟာ၊ poppet ကိုရွှေ့လျှားစေမယ့် pilot pressure အား၊ resist အနေနဲ့ ဆန့်ကျင် တားဆီးထားတဲ့ pressure လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ hydraulic fluid circuits တွေမှာတော့ back pressure ဟာ၊ valve ရဲ့ အထွက် downstream ရှိ controlled flow ဒါမှမဟုတ် counterbalance valve မှတဆင့် သက်ရောက်နေတတ်ပါတယ်။ pilot-operated with external drain type check valve တွေကို၊ pilot-operated 2-way function အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ pilot piston return အတွက်၊ external-drain port ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Spool in middle position
valve ရဲ့ outlet port (၂) ခုစလုံးပိတ်နေတဲ့အတွက်၊ fluid ဟာ hydraulic actuator တနည်းအားဖြင့် hydraulic cylinder အတွင်းသို့ စီးဆင်းဝင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အခြေအနေကို၊ directional valve ရဲ့ 'hold' position အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ pressurized fluid flow ဟာ directional valve မှတဆင့် hydraulic cylinder ကိုရွှေ့လျှားစေမယ့် expanding side ဖက်သို့၊ စီးဝင်မှသာ cylinder movement ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
Fig. Spool moved to right position
spool ဟာ ညာဖက်သို့ရွှေ့လျှားတဲ့အတွက် pressurized fluid flow ဟာ directional valve မှတဆင့် hydraulic cylinder နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ right-side port မှတဆင့် expanding side ဖက်သို့၊ စီးဝင်သွားပြီး၊ cylinder အတွင်းမှ piston ကိုရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ contracting side နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့t left-side port ကတော့ ပိတ်မြဲ ပိတ်နေပါတယ်။ left-side port ပိတ်နေတဲ့ အတွက်၊ cylinder ရဲ့ contracting side မှ fluid ဟာ၊ hydraulic tank အတွင်းသို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်း ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ (Originally Posted by ကိုထွန်း)
လက်တွေ့မှာတော့ spool-type directional control valves တွေဟာ၊ hydraulic cylinder ကို mid-stroke position မှရွှေ့လျှားမသွားစေဖို့၊ အချိန်အကြာကြီး မထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ spool valves တွေမှာ by-pass line တွေ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ hydraulic cylinder ကို အနေအထားတခုခုမှာ stop position ဖြင့် ရပ်တန့်ထားစဉ်၊ ပြင်ပမှသက်ရောက်လာမယ့် outside force တခုခုကြောင့်၊ hydraulic cylinder ဟာ နဂိုမူလ position မှ တဖြည်းဖြည်း၊ ရွှေ့သွားတတ်ပါတယ်။
Fig. Typical circuit incorporating pilot-operated with external drain type check valve
အထက်မှာ pilot-operated with external drain type check valve နဲ့ 3/2 way spool type directional control valve တို့ကို၊ တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းအား၊ ဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ hydraulic cylinder ကို position တခုခုမှာ ရပ်လိုက်စဉ်၊ နဂိုမူလ position မှ တဖြည်းဖြည်း၊ ရွှေ့မသွားစေရန်၊ operated check valves တွေကို hydraulic cylinder ရဲ့ expanding side နဲ့ contracting side တို့မှတဆင့် directional valve ရဲ့အထွက် port 'A' နဲ့ port 'B' တို့ဖြင့်် ဆက်သွယ်ထားပြီးမှ၊ fluid ကို hydraulic tank သို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်း ဝင်ရောက်သွားစေရန်၊ စီစဉ်ထားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ cylinder မှ piston seal ယိုစိမ့်မှုမပေါါပေါက်သ၍၊၊ hydraulic cylinder ဟာ၊ ပြင်ပမှ outside force အားတခုခု သက်ရောက်ပေမယ့် ရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ နဂိုမူလ position မှာသာ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကြီးရဲ့ သဘေ်ာတစီးပေါါ အလည်ရောက်ခဲ့စဉ်က၊ aft station မှာ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် 'ဒူဒူ' ကြည့်နေစဉ်၊ ခြေထောက်အောက်မှ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ တစုံတရာ ဘယ်ညာ ရိုက်ခါတ်နေတာကို၊ ခံစားသိနဲ့ 'သိ' ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာသံကြီးလည်း ဦးကြီးရေလို့ 'ဒူဒူ' မေးတဲ့အခါ၊ အောက်ရေစီး lower current ကြမ်းသမို့၊ rudder ဘယ်ညာ လှုပ်နေတာလို့ပြောပြီး၊ steering gear room သို့ခေါါသွားပါတယ်။ steering gear room မှ hydraulic cylinder (၂) လုံးဟာ ဟိုဖက်ဒီဖက် horizontally အနေအထားဖြင့်၊ အလိုအလျှောက်ရွှေ့နေသလို၊ rudder stock ကို ဘယ်ညာ၊ လည်အောင် တွန်းနေတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးကြီးမှ steering gear hydraulic pump တလုံးကို၊ မောင်းလိုက်စဉ်မှာတော့ hydraulic cylinder (၂) လုံးရဲ့ ရွှေ့လျှား လှုပ်ရှားမှု၊ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
hydraulic cylinder (၂) လုံးကို တကယ်တမ်းရွှေ့လျှားစေမယ့် directional valves တွေမှာ၊ pilot-operated with external drain type check valves တွေကို တွဲဖက်တတ်ဆင် ထားတာ တွေ့ရပြီး၊ valve ရဲ့ အဝင်နဲ့အထွက် inlet and outlet မှ fluid flow pressure ကို equalized အနေနဲ့ ညီမျှနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့ အတွက်၊ hydraulic pump မောင်းကာ၊ pilot-operated with external drain type check valves တွေမှတဆင့် hydraulic cylinder ကို position တခုခုမှာ ရပ်ထားစဉ်၊ နဂိုမူလ position မှ တဖြည်းဖြည်း၊ ရွှေ့မသွားစေရန်၊ ထိမ်းလိုက်တာလို့ 'ဒူဒူ' နားလည်မိပါတော့တယ်။
Reference and image credit to : http://hydraulicspneumatics.com/, http://www.comatrol.com/,
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:20 1 comment:
pressure-compensated flow control valve, quick drop valve တို့ဟာ flow control valve တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ flow valve တွေဟာ hydraulic circuit အတွင်းမှာ load အပြောင်းအလဲ ရှိနေပေမယ့် hydraulic circuit အတွင်းမှ hydraulic fluid ကို၊ constant flow rate ဖြင့်တသမတ်တည်း စီးဆင်းနေစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Quick drop valve - bulldozer မှ blade တွေရဲ့ hydraulic cylinder အောက်ခြေမှာ quick drop valves တွေကို တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ quick drop valve တွေဟာ၊ flow control valve အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ blade ကို အောက်သို့အလျှင်အမြန် lower quickly အနေအထားဖြင့် ချနိုင်စေဖို့အပြင်၊ cylinder အောက်ခြေမှ hydraulic pressure ကိုလည်း relief အနေနဲ့ လျှော့ချပေးပါတယ်။
Fig. Quick drop valve
Fig. Blade raised up position
blade ကို အပေါါသို့ မြှင့်တင်လိုက်တဲ့အခါ၊ hydraulic fluid ဟာ under pressure flow ဖြင့် orifice မှတဆင့် valve ရဲ့ sleeve အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာပြီး၊ 'မ' တင်ထားတဲ့ blade ရဲ့ cylinder ထိပ်သို့ စီးဆင်းသွားပါတယ်။ fluid အချို့ကတော့ orifice ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုမရှိပဲ၊ plunger နောက်မှ cavity လို့ခေါါတဲ့ နေရာလွတ် fluid filled space အတွင်းသို့၊ စီးဆင်း ဝင်ရောက်ပါတယ်။ cavity အတွင်းရှိ fluid pressure ဟာ spring ကိုထပ်ဖိထားတဲ့အတွက်၊ valve ဟာ plunger ကို sleeve အတွင်း 'အထိုင်' ကျနေစေရန် တွန်းထားနိုင်ပါတယ်။ sleeve အတွင်းမှာ plunger အထိုင်ကျနေတဲ့အတွက်၊ valve ဟာ close အနေအထားဖြင့်၊ ပိတ်နေပါတယ်။ valve ပိတ်နေတဲ့အတွက်၊ hydraulic cylinder အောက်ခြေမှ fluid ဟာ port မှတဆင့် ဝင်ရောက်လာပြီး၊ quick drop valve နဲ့ဆက်ထားမယ့် control valve အတွင်းကိုသာ၊ ပြန်လည်စီးဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Blade quickly lowering position
blade ကို အောက်သို့ freely lower အနေအထားဖြင့် အလျှင်အမြန် နှိမ့််ချလိုက်တဲ့အခါ၊ hydraulic cylinder ရဲ့ထိပ်မှ fluid ဟာလည်း၊ forcefully return အနေအထားဖြင့် control valve မှတဆင့် quick drop valve အတွင်းသို့၊ စီးဆင်း ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ fluid flow ကြောင့် quick drop valve ရဲ့ orifice မှာ differential pressure ဖြစ်ပေါါလာသလို၊ differential pressure ကြောင့် valve နဲ့ plunger ဟာ return spring force ကိုဆန့်ကျင်ကာ၊ ရွှေ့လျှားသွားပါတယ်။ fluid ဟာ quick drop valve အတွင်းမှ open passage ကို၊ ဖြတ်သန်း၊ စီးဆင်းသွားတဲ့အတွက်၊ flow မြင့်တက်လာပြီး၊ hydraulic cylinder ရဲ့ အောက်ခြေ bottom မှာ vacuum ဖြစ်ပေါါမှုကိုလည်း၊ တားဆီးးပေးပါတယ်။
blade control lever ကို၊ lower position အနီးသို့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါ၊ quick drop valve ဟာ အလုပ် မလုပ်တော့သလို၊ blade ကို' မ' တင်ပေးထားတဲ့ hydraulic cylinder မှ၊ blade ကို တဖြည်းဖြည်း gradually အနေအထားဖြင့် အောက်သို့ ချပေးပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ထိပ်မှာ fluid flow မရှိတော့တဲ့အတွက်၊ quick drop valve နဲ့ valve အတွင်းမှ plunger မှာ pressure လည်း မရှိတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ cylinder ရဲ့ အောက်ခြေမှ fluid ဟာ control valve မှတဆင့် flow back အနေနဲ့ပြန်လည်စီးဆင်းပြီး၊ pressurized fluid flow အနေနဲ့ hydraulic cylinder ရဲ့ထိပ်သို့ ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
Directional valve - hydraulic actuator တနည်းအားဖြင့် hydraulic cylinder တွေ အတွင်းသို့၊ ပေးပို့မယ့် fluid ရဲ့ flow ကို ရပ်တန့်စေနိုင်သလို၊ စီးဆင်းစေနိုင်တဲ့အပြင် flow direction ကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အတွက် flow control valve အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ directional valve တွေဟာ sample construction အနေနဲ့ တည်ဆောက်ပုံ ရိုးရှင်းပြီး၊ ပင်မ main line မှဝင်လာတဲ့ fluid အား ဘယ်ဖက်နဲ့ ညာဖက် သို့မဟုတ် ညာဖက်နဲ့ ဘယ်ဖက်မှ line တွေသို့ valve မှတဆင့်၊ လိုအပ်သလို ရွေးချယ် စီးဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ directional valves တွေကို၊ fluid စီးဆင်းပုံ function ပေါါမူတည်ပြီး၊ 2/2way, 3/2way, 4/2way, 4/3way, 5/2way နဲ့ 5/3way ဆိုပြီး၊ သတ်မှတ်ကြသလို၊ တည်ဆောက်ပုံ type အရ၊ sliding-plate valve, poppet valve နဲ့ spool valve ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Spool type directional valve
double acting hydraulic cylinder တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့၊ 3/2way directional spool valve ကို၊ ဥပမာအဖြစ်ဖော်ပြပါဦးမယ်။ pressurized fluid ဟာ hydraulic oil pump မှတဆင့် valve ရဲ့ inlet port သို့ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ valve ရဲ့ spool ဟာ အလယ်ဗဟို middle position မှာရှိနေစဉ်၊ outlet port (၂) ခုစလုံးပိတ်နေပြီး၊ fluid ဟာ valve အတွင်းမှဖြတ်သန်းကာ၊ hydraulic tank အတွင်းသို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်း ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
valve ရဲ့ outlet port (၂) ခုစလုံးပိတ်နေတဲ့အတွက်၊ fluid ဟာ hydraulic actuator တနည်းအားဖြင့် hydraulic cylinder အတွင်းသို့ စီးဆင်းဝင်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ အခြေအနေကို၊ directional valve ရဲ့ 'hold' position အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ pressurized fluid flow ဟာ directional valve မှတဆင့် hydraulic cylinder ကိုရွှေ့လျှားစေမယ့်expanding side ဖက်သို့၊ စီးဝင်မှသာ cylinder movement ဖြစ်ပေါါပါတယ်။
spool ဟာ ညာဖက်သို့ရွှေ့လျှားတဲ့အတွက် pressurized fluid flow ဟာ directional valve မှတဆင့် hydraulic cylinder နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ right-side port မှတဆင့် expanding side ဖက်သို့၊ စီးဝင်သွားပြီး၊ cylinder အတွင်းမှ piston ကိုရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ contracting side နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့t left-side port ကတော့ ပိတ်မြဲပိတ်နေပါတယ်။ left-side port ပိတ်နေတဲ့ အတွက်၊ cylinder ရဲ့ contracting side မှ fluid ဟာ၊ hydraulic tank အတွင်းသို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်း ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
Fig. Spool moved to left position
spool ဘယ်ဖက်သို့ ရွှေ့လျှားတဲ့အခါ၊ pressurized fluid flow ဟာ directional valve မှတဆင့် hydraulic cylinder နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတဲ့ left-side port မှတဆင့် contraction side ဖက်သို့၊ စီးဝင်သွားပြီး၊ cylinder အတွင်းမှ piston ကို မူလနေရာမှ ဆန့်ကျင်ဖက်လားရာဖြင့် ရွှေ့လျှားစေပါတယ်။ hydraulic cylinder ရဲ့ expanding side နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ right-side port လည်းပိတ်သွားပြီး၊ မူလရှိနေတဲ့ expanding side မှ pressurized fluid ဟာ hydraulic tank အတွင်းသို့ return အနေနဲ့ ပြန်လည် စီးဆင်း ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။
directional valve တွေဟာ၊ stop or block fluid flow, allow fluid flow and change direction of fluid flow ဆိုပြီး၊ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို fluid ရဲ့ flow ကိုရပ်တန့်စေနိုင်ပြီး၊၊ စီးဆင်းစေနိုင်တဲ့ အပြင်လိုအပ်သလို flow direction ကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ directional valves တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုလျှင် check valve တွေက စပြီး၊ ပြောကြပါတယ်။ check valve ဟာ fluid flow ကို ဦးတည်ရာ direction တဖက်တည်းသို့ စီးဆင်းစေပြီး၊ ဆန့်ကျင်ဖက် opposite direction ဖြင့်စီးဝင်လာမယ့် flow ကိုပါ block အနေနဲ့ တားဆီးပေးတဲ့ အတွက်၊ directional valve အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Check valve - hydraulic system အတွင်းမှာ ဆန့်ကျင်ဖက် opposite direction ဖြင့်စီးဝင်လာမယ့် fluid ရဲ့ flow ကိုတားဆီးရန်အတွက်၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ check valves တွေကို poppet-type check valve နဲ့ pilot-operated check valve ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် pilot-operated check valve တွေဟာ external source တခုခုကို အသုံးပြုပြီး၊ မူလစီးဆင်းနေတဲ့ fluid ရဲ့ free flow ကိုရပ်တန့်ကာ၊ ပြောင်းပြန် reverse flow ဖြင့်လည်း စီးဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Fig. Cross-sectional views and symbols for two types of check valves
(Vertical type and Right-angle type)
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ poppet type check valves တွေဟာ၊ အသုံးများတဲ့ check valve တွေဖြစ်ပြီး၊ မူလက poppet အစား ball ကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ball ကိုတတ်ဆင် အသုံးပြုတဲ့အတွက်၊ ball check valve လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ ball check valve တွေဟာ၊ valve operate လုပ်တိုင်း အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ball လှုပ်ရှားခဲ့ရရာမှတဆင့် ball ထိုင်မယ့် contact seat မှာ ပွန်းစားတဲ့ wear groove လိုင်းတွေဖြစ်ပေါါလာနိုင်ပြီး၊ valve မလုံတော့တဲ့ အခြေအနေ leakage condition ဖြစ်ပေါါလာတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ball အစား guided poppet တွေကိုအစားထိုး၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်၊ သက်ေတ symbol အနေနဲ့ကတော့ ball ပုံသဏ္ဍန်လေးဖြင့်သာ၊ ဖော်ပြ သတ်မှတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Poppet type in-line/ vertical check valve with spring
check valve အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ fluid ဟာ spring ကိုတွန်းပြီး၊ 'မ' တင်လိုက်တဲ့အတွက်၊ spring နဲ့အတူ poppet လည်း မူလနေရာမှရွှေ့လျှားသွားပါတယ်။ valve body seat ရဲ့အပေါါပိုင်းမှာ angled seat face ပုံသဏ္ဍန်တည်ဆောက်ထားပြီး၊ အပေါက် holes တွေဖောက်ထားတဲ့အတွက်၊ spring ရဲ့တွန်းအားကြောင့် poppet နေရာရွှေ့သွားစဉ် flow ဟာ valve အတွင်းမှ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ poppet type check valves တွေဟာ ပျက်စီးချို့ယွင်းခြင်းဖြစ်ပေါါမှုနည်းပါးတဲ့ almost trouble-free devices တွေဖြစ်ပါတယ်။ right-angle type, screw-in cartridge type နဲ့ sub-plate mounted type ဆိုပြီး၊ တတ်ဆင်ပုံအနေအထားအရ poppet type check valves တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Fig. Poppet type inline/ vertical check valve without spring
check valves တွေဟာ flow ကို control လုပ်ပေးသလို၊ pressure ကိုလည်း control လုပ်နိုင်ပါတယ်။ check valve မှာအသုံးပြုထားတဲ့ spring ရဲ့တွန်းအားဟာ ပမာဏသေးငယ်တဲ့ light force ဖြစ်ပြီး၊ pressurized flow မရှိတော့တာနဲ့ poppet သို့ အလွယ်တကူ return အနေနဲ့ပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ spring force ရဲ့ပမာဏမြင့်မားတဲ့အခါ energy loss နဲ့ heat တို့ဖြစ်ပေါါနိုင်သလို၊ poppet ရွှေ့လျှားစေဖို့ fluid pressure ပမာဏအနည်းငယ်သာ၊ လိုအပ်တဲ့အတွက် light force spring တွေကို အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ vertical type poppet check valve တွေမှာတော့၊ poppet ရဲ့အရွယ်အစားလည်း ကြီးမားပြီး၊ poppet ရဲ့ အလေးချိန် weight ဖြင့်၊ seat အပေါါမှာ ' ပြန်ထိုင်' နိုင်တဲ့အတွက်၊ without spring အဖြစ်၊ spring ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားခြင်း မရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
သန်မာတဲ့ strong springs တွေကို၊ ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားတဲ့ check valves တွေမှာတော့၊ fluid flow မှာ extra resistance ဖြစ်ပေါါလာတဲ့အတွက်၊ low pressure by pass ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပြီး၊ check valve ဟာ relief valve အဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ low pressure by pass ထည့်သွင်းထားတဲ့ check valves တွေကို၊ low-pressure filter တွေနဲ့ heat exchanger ကဲ့သို့ low-pressure circuits တွေနဲ့ pilot-operated directional control valves တွေမှာ၊ minimum pilot pressure ကိုထိန်းထားနိုင်စေဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. In-line check valve with orifice drilled through poppet
(Poppet type orifice check valve)
အချို့ check valve တွေရဲ့ poppet မှာ အပေါါက်ဖောက်ကာ၊ orifice အနေနဲ့ ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားပြီး၊ fixed-orifice flow-control function ဖြင့် အလုပ်လုပ်စေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ orifice ဟာ fluid ကို လားရာ one direction တဖက်တည်းသို့၊ free flow အနေနဲ့ စီးဆင်းစေသလို၊ ဆန့်ကျင်ဖက် opposite way မှ flow ကိုလည်း၊ measured flow အဖြစ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ orifice ဟာ အသေတတ်ဆင်ထားတဲ့ non-adjustable component ဖြစ်ပြီး၊ ချိန်ညှိစရာမလိုအပ်တဲ့ tamper proof component လို့လည်း၊ ပြောနိုင်ပါတယ်။ actuator speed ကို ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်မှသာ၊ orifice ရဲ့အရွယ်အစား size ကိုပြောင်းလဲကြပါတယ်။ poppet type orifice check valves တွေကို flange fitted သို့မဟုတ် hard piped အနေနဲ့ actuator port ဖြင့်တိုက်ရိုက်၊ တတ်ဆင်ထားကြပြီး၊ system မှာ line broke နဲ့ valve malfunctioned ပေါါပေါက်တဲ့အခါ၊ actuator ကိုထိခိုက်မှု မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Reference and image credit to : ကိုတင်မင်းထူး၊ "Unit Instruction Manual - Hydraulic Control Valves" - KOMATSU, http://www.indiamart.com/, http://hydraulicspneumatics.com/, http://www.tucsonhydrocontrols.com/, http://www.cranechempharma.com/
Posted by ကိုထွန်း at 17:36 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 01:09 No comments:
mooring နဲ့ towing arrangement ပိုင်းဆိုင်ရာ equipments တွေကို၊ အမျိုးအမည်ကွဲပြားစွာတွေ့ရပါတယ်။ tanker သဘေ်ာတွေမှာ အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေကို၊ ပတ်ကာ ချည်နှောင်ရန်၊ ဗုံလုံတိုင်လို့ခေါါတဲ့ 'bitt' တွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်လျှင် အထိုင်ချထားတဲ့ fitting ပုံသဏ္ဍန်ပေါါမူတည်ပြီး၊ double bitt bollard, single cruciform bollard နဲ့ recessed bitt bollard ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"double bitt bollard" တွေရဲ့ load position (P) ဟာ bollard diameter (D) ရဲ့အထက် '1.2 D' အကွာအဝေးမှာဖြစ်ပြီး၊ bollard အပေါါကြိုးချည်ရမယ့် နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ double bitt bollard ရဲ့ SWL လို့ခေါါတဲ့ safe working load ဟာ၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL လို့ခေါါတဲ့ minimum breaking load တန်ဘိုးပမာဏအပေါါမူတည်ပြီး၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL တန်ဖိုးပမာဏ အတိုင်း၊ ရေးသားသတ်မှတ်ရပါတယ်။
Fig. JIS F - 2804 Standard - Double bitt bollard specifications
double bitt bollard တွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ကတည်းက geometric factor ဆိုတဲ့ design တန်ဖိုးအနေနဲ့ (GF =2) ကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ကာ၊ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ design basis load ပမာဏအနေနဲ့ "DBL = MBL x GF" ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းအပေါါမှာ အခြေခံထားပြီး test load ပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ stress limit အနေနဲ့ကတော့ ≤ 85 % specified minimum yield stress တနည်းအားဖြင့် "≤ 85 % SMYS" ဆိုပြီး၊ တွက်ချက်ကာထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
"single cruciform bollard" တွေရဲ့ load position (P) ဟာ bollard ရဲ့ အမြင့် (H ÷ mooring rope diameter D/ 2) ဆိုတဲ့ အကွာအဝေးမှာဖြစ်ပြီး၊ bollard အပေါါ ကြိုးချည်ရမယ့် နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ single bitt bollard ရဲ့ SWL ကတော့ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL လို့ခေါါတဲ့ minimum breaking load တန်ဘိုးပမာဏအပေါါမူတည်တဲ့အတွက်၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL တန်ဖိုးပမာဏ အတိုင်း၊ ရေးသားသတ်မှတ်ရပါတယ်။
Fig. JIS F - 2084 Standard - Single Cruciform Cross Bollards
geometric factor ဆိုတဲ့ design တန်ဖိုး (GF) ဟာ '1" ဖြစ်ပြီး၊ test load ပမာဏအနေနဲ့ "DBL = MBL x GF" ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းအပေါါမှာပဲ အခြေခံထားသလို၊ stress limit ကိုလည်း၊ "≤ 85 % SMYS" ဆိုပြီး၊ တွက်ချက်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ single cruciform bollard တွေမှာ 'horned' ထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားပြီး၊၊ single cruciform cross bollards လို့ခေါါလေ့ရှိသလို၊၊ double bitt bollard တွေမှာလည်း၊ 'horned' ကိုထည့်သွင်း တတ်ဆင်လေ့ရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
"recessed bitt bollard" ဆိုတာကတော့ 'horned' ထည့်သွင်းတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ single bitt bollard တွေဖြစ်ပြီး၊ ကြိုးချည်ရမယ့်နေရာ load position (P) ဟာ bollard ရဲ့ အမြင့် (H - 0.5 mooring rope diameter) ဆိုတဲ့ အကွာအဝေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ double bitt bollard တွေနဲ့ single cruciform bollard တွေလို၊ recessed bitt bollard တွေမှာလည်း၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL တန်ဖိုးပမာဏ အတိုင်း၊ SWL ကိုရေးသားသတ်မှတ်ရပါတယ်။ အလားတူ geometric factor တန်ဖိုး (GF) ဟာ '1" ဖြစ်ပြီး၊ test load ပမာဏအနေနဲ့ "DBL = MBL x GF" ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းအပေါါမှာပဲ အခြေခံထားသလို၊ stress limit ကိုလည်း၊ "≤ 85 % SMYS" ဆိုပြီး၊ တွက်ချက်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
tanker သဘေ်ာတွေမှာ mooring နဲ့ towing အတွက်အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေ၊ ဖြတ်သန်းသွားမယ့် fairlead တွေကိုလည်း၊ open chock, closed chock, button-roller chocks, pedestal fairlead roller,4roller type universal fairlead နဲ့5roller type universal fairlead ဆိုပြီး ခွဲခြားထားသလို၊ မြောက်အမေရိကတိုက်မှ great lakes ရေချိုအိုင်ကြီးတွေအတွင်း ဝင်ရောက်မောင်းနှင်မယ့် "Lake Size" လို့ခေါါတဲ့ သဘေ်ာတွေအတွက်၊ 'St. Lawrence mooring guide' ဆိုတဲ့ fairlead တွေကိုလည်း၊ တတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။
Fig. St. Lawrence mooring guide
ငယ်ငယ်က အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်း ပထဝီဘာသာရပ်ကို သင်ရတဲ့အခါ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက မြောက်အမေရိကတိုက်မှ ရေချိုအိုင် fresh water lake ကြီးတွေအကြောင်း၊ သင်ပေးခဲ့တာကို မှတ်မိနေပါတယ်။ Superior, Michigan, Huron, Erie နဲ့ Ontario ဆိုတဲ့ ရေချိုအိုင်ကြီးတွေဟာ၊ ကမ္ဘာ့အပေါါလွှာ surface fresh water ရေချိုပမာဏရဲ့ (၂၁ %) ကို သိုလှောင်ထားတဲ့ ရေအိုင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီး၊ grate lakes တွေလို့ခေါါကြပါတယ်။ grate lakes ကြီးတွေနဲ့ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကို၊ Saint Lawrence Seaway မှ ဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။ ထားရာမှာနေ၊ စေရာကိုသွားခဲ့ရတဲ့ သဘေ်ာသား ဘဝတုန်းကတော့ ဂျုံမှန့်တွေ၊ ပြောင်းဆန်တွေ၊ သတ္တုရိုင်းတွေနဲ့ တခါတလေသစ်လုံးတွေသယ်ဖို့၊ grate lakes ကြီးတွေအထဲ ဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ grate lakes ကြီးတွေအထဲကိုဝင်တဲ့အခါ၊ ပြင်သစ်လို 'la Voie Maritime du Saint-Laurent' လို့ခေါါတဲ့ Saint Lawrence Seaway မှတဆင့် ဝင်ရောက်ရပါတယ်။ Saint Lawrence Seaway အဝင်အထွက်မှာ mooring နဲ့ towing အတွက်အသုံးပြုမယ့် roller type fairlead တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍန်ဟာအခြား၊ roller type fairlead တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ ကွာခြားမှုရှိပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ နောက်ဖက်ဘယ်နဲ့ညာ ဘေးတဖက်တချက်စီမှာ တတ်ဆင်ထားကာ၊ St. Lawrence mooring guide ရယ်လို့ အမည်ပေးကြပါတယ်။
Fig. Open chock
Fig. Close chock
open chock ကိုအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ သဘေ်ာတွေမှာသာ တတ်ဆင်ကြပြီး၊ tanker သဘေ်ာတွေမှာတော့ close chock ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ close chock ကို panama chock လို့လဲခေါါပါတယ်။ panama chock ဆိုလို့ သဘေ်ာသား ဘဝတုန်းက၊ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ panama တူးမြောင်းအကြောင်းကိုလည်း၊ တပိုင်းတစထည့်ပြောပါရစေ။ အတ္တလန်တိတ်နဲ့ ပိစိဖစ်သမုဒ္ဒရာကို ဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ panama တူးမြောင်းမှ locks တွေအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ရန်၊ လျှပ်စစ်ရထား mule locomotive တွေဟာ IWTC steel wire တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ ဘယ်ညာဘေးတဖက် တချက်စီမှ၊ သဘေ်ာကိုဆွဲယူပါတယ်။ ဟိုးတချိန်ကတော့ ရေနွေးငွေ့အင်ဂျင်သုံး steam locomotive ရထားစက်ခေါင်းတွေနဲ့ ဆွဲယူခဲ့ကြပါတယ်။ လက်တင်ဘာသာနဲ့ Canal de Panamá လို့ခေါါတဲ့ ပနားမားတူးမြောင်းဟာ (၇၇. ၁) ကီလိုမီတာ တနည်းအားဖြင့် (၄၈) မိုင်ရှည်ပြီး၊ အလယ်မှာ လူတွေတူးထားတဲ့ Gatun Lake ဆိုတဲ့ရေအိုင်ကြီး တအိုင်ရှိပါတယ်။ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာ ကရစ်ဘီယံပင်လယ် Cristóbal ဆိပ်ကမ်းဖက်အခြမ်းမှ ဝင်ရောက်တဲ့အခါ၊ အလယ်မှ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးဆီရောက်ဖို့ chamber အဆင့် (၃) ဆင့်ရှိတဲ့ Gatun Locks တွေကိုဖြတ်သန်းရပါတယ်။ Cristóbal ဆိုတာကတော့ အမေရိကတိုက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ၊ သဘေ်ာသားဟောင်းကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ Christopher Columbus ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့၊ ပေးထားတဲ့ နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Panama Canal
Locks တွေဟာ (၃၃. ၅၃) မီတာကျယ်ပြီး၊ (၃၂၀) မီတာရှည်ကာ၊ တဖက်တချက်စီမှာ ရေလုံတခါးတွေ တတ်ဆင်ထားတဲ့ water saving basins တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး lock အတွင်းသို့ သဘေ်ာ ဝင်ရောက်လာတာနဲ့ ရေတံခါးကိုပိတ်ကာ၊ ရေသွင်းပြီး၊ (၂၆) မီတာ တနည်းအားဖြင့် (၈၅) ပေ အမြင့်အထိ ရေမျက်နှာပြင်ကို မြှင့်တင်ယူပါတယ်။ ဒုတိယ lock နဲ့ ရေမျက်နှာပြင်ခြင်းညီသွားတဲ့အခါ၊ ပထမ lock နဲ့ ဒုတိယ lock အကြားမှ ရေတံခါးကိုဖွင့်ကာ၊ သဘေ်ာကို ဆွဲသွင်းယူပါတယ်။ ဒုတိယ lock အတွင်းသို့ သဘေ်ာဝင်ရောက်လာတာနဲ့ ပထမ lock နဲ့ ဒုတိယ lock အကြားမှ ရေတံခါးကို ပြန်ပိတ်ကာ၊ (၂၆) မီတာ အမြင့်အထိရောက်အောင် ရေသွင်းပြီး ရေမျက်နှာပြင်ကို၊ ထပ်မံမြှင့်တင်ယူပါတယ်။ တဖန် တတိယ lock နဲ့ ရေမျက်နှာပြင်ခြင်း ညီသွားတဲ့အခါ၊ ဒုတိယ lock နဲ့ တတိယ lock အကြားမှ ရေတံခါးကို ပြန်ပိတ်ကာ၊ Gatun Lake နဲ့ ရေမျက်နှာပြင်ခြင်းညီသွားတဲ့ အမြင့်အထိရောက်အောင် ရေသွင်းပြီး ရေမျက်နှာပြင်ကို၊ ထပ်မံမြှင့်တင်ယူပြန်ပါတယ်။ တတိယ lock နဲ့ Gatun Lake တို့ရေမျက်နှာပြင်ခြင်း ညီသွားတဲ့အခါမှာတော့ တတိယ lock နဲ့ Gatun Lake အကြားမှ ရေတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး၊ Chagres မြစ်ပေါါမှ၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Gatun Lake ဆိုတဲ့ လူတွေတူးထားတဲ့ dam ကြီးအတွင်းသို့၊ သဘေ်ာဟာ မောင်းနှင် ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ Gatun Lake အတွင်းသို့ သဘေ်ာဝင်ရောက်ရန်၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ chamber အဆင့် (၃) ဆင့်ရှိ Gatun Locks တွေကို၊ Atlantic locks တွေလို့လည်းခေါါပါတယ်။
Gatun Lake မှတဆင့်၊ Chagres မြစ်အတွင်းသို့ ဆက်လက်မောင်းနှင်ပြီးတဲ့အခါ၊ Culebra cut လို့ခေါါတဲ့ တောင်တန်းတွေကြားထဲမှ Gaillard cut ကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းရပါတယ်။ Gaillard cut အပေါါမှာ Pan-American Highway လမ်းမကြီးရဲ့ Centennial Bridge တံတားကြီးကို၊ ဖြတ်သန်း တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Centennial Bridge တံတားကြီးကို ကျော်တာနဲ့ Pedro Miguel Locks အဝင်သို့ သဘေ်ာရောက်လာပြီး၊ locks အဝင်ရေတံခါးကိုဖွင့်ကာ သဘေ်ာကို၊ ဆွဲသွင်းယူပါတယ်။ locks အတွင်းသို့ သဘေ်ာ ဝင်ရောက်လာတာနဲ့ ရေတံခါးကိုပိတ်ကာ၊ locks အပြင်မှ Miraflores Lake ရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ညီသွားတဲ့အထိ၊ (၉. ၅) မီတာခန့်ရေမျက်နှာပြင် နိမ့်ကျသွားအောင် ရေထုတ်ယူပါတယ်။ Miraflores Lake နဲ့ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ညီသွားတဲ့အခါ၊ Pedro Miguel Locks နဲ့ Miraflores Lake တို့အကြားမှ၊ ရေတံခါးကိုဖွင့်ကာ သဘေ်ာကို၊ Miraflores Lake အတွင်းသို့ ဆွဲသွင်းယူပါတယ်။
Miraflores Lake ရဲ့အထွက်မှာတော့ chamber အဆင့် (၂) ဆင့်ရှိတဲ့ Miraflores Locks တွေရှိပါတယ်။ တဖန် Miraflores Lake နဲ့ ပထမ Miraflores Locks အကြားမှ၊ အဝင်ရေတံခါးကို ဖွင့်ကာ သဘေ်ာကို၊ ဆွဲသွင်းယူပါတယ်။ locks အတွင်းသို့ သဘေ်ာ ဝင်ရောက်လာတာနဲ့ ရေတံခါးကိုပိတ်ကာ ပထမ Miraflores Locks အတွင်း၊ (၁၆. ၅) မီတာခန့်ရေမျက်နှာပြင် နိမ့်ကျသွားအောင် ရေထုတ်ယူပါတယ်။ ဒုတိယ Miraflores Locks ရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ညီသွားတဲ့အခါမှာတော့၊ ပထမ Miraflores Locks နဲ့ ဒုတိယ Miraflores Locks တို့အကြားမှ၊ ရေတံခါးကိုဖွင့်ကာ သဘေ်ာကို၊ ဆွဲသွင်းယူပြန်ပါတယ်။ lock အတွင်းသို့ သဘေ်ာ ဝင်ရောက်လာတာနဲ့ ရေတံခါးကိုပိတ်ကာ၊ locks အပြင်မှ Balboa ဆိပ်ကမ်းရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ညီသွားတဲ့အထိ၊ (၁၆. ၅) မီတာခန့် ရေမျက်နှာပြင်နိမ့်ကျသွားအောင်၊ ထပ်မံ ရေထုတ်ယူပါတယ်။ Balboa ဆိပ်ကမ်းရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်နှင့် ညီသွားတဲ့အခါ၊ ဒုတိယ Miraflores Locks ရဲ့အထွက်မှ ရေတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ပြီး၊ သဘေ်ာဟာ လက်တင်လို Puente de las Américas ဆိုတဲ့ Bridge of the Americas တံတားကြီးအောက်မှဖြတ်ကာ၊ ပိစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအဝင် ပနားမားပင်လယ်ကွေ့ Gulf of Panama သို့ရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။
ပနားမားတူးမြောင်းကို Cristóbal ဆိပ်ကမ်းဖက်မှဝင်တဲ့အခါ၊ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးဆီရောက်ဖို့ တဆင့်ပြီးတဆင့်၊ မြှင့်တင်ယူသွားပြီး၊ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးမှအထွက် Balboa ဆိပ်ကမ်းသို့ သွားရာမှာတော့ တဆင့်ပြီးတဆင့် နိမ့်ယူသွားပါတယ်။ locks တွေအတွင်းသို့ ရေအသွင်းအထုတ် လုပ်ကာ၊ ရေမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးကို ပြောင်းလဲချိန်ညှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ Cristóbal ဆိပ်ကမ်းဖက်မှဝင်လာတဲ့ သဘေ်ာတွေနဲ့ Balboa ဆိပ်ကမ်းဖက်မှဝင်လာတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ နေ့လည်ချိန်လောက်မှာတော့ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးအတွင်း၊ ဆုံကြပါတယ်။
panama တူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ရေလမ်းကြောင်းခရီးဟာ၊ Suez တူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်းသွားလာတဲ့ ရေလမ်းကြောင်းခရီးလို၊ ဦးတည်ရာတဖက်တည်းကိုသာ၊ သွားလာရတဲ့ တလမ်းသွား ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးမှာ သဘေ်ာအားလုံးဆုံပြီးတာနဲ့ ပိစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ကို သွားမယ့်၊ သဘေ်ာတွေဟာ locks တွေကိုဖြတ်သန်းရင်း၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် နိမ့်ဆင်းသွားရပါတယ်။ အလားတူပဲ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ကို သွားမယ့်၊ Balboa ဆိပ်ကမ်းဖက်မှဝင်လာတဲ့ သဘေ်ာတွေဟာ၊ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးကိုရောက်ဖို့၊ locks တွေကိုဖြတ်သန်းရင်း၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်တက်ရသလို၊ Gatun Lake ရေအိုင်ကြီးမှာ သဘေ်ာအားလုံးဆုံပြီးတာနဲ့ locks တွေကိုဖြတ်သန်းရင်း၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် နိမ့်ဆင်းကာ ဆင်းသွားရပါတယ်။ panama တူးမြောင်းကိုဖြတ်သန်းဖို့ မနက်စောစော (၃) နာရီလောက်မှစကာ၊ သဘေ်ာတွေတန်းစီရသလို၊ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၂) ဆိုတဲ့ post အစမှာရေးသားခဲ့တဲ့ "Starting test" ကိုလည်းဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
(၁၈၈၁) ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပြီး၊ (၁၉၁၄) ခုနှစ်မှာ တည်ဆောက်မှုပြီးစီးခဲ့တဲ့ panama တူးမြောင်းကြောင့် အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ခြမ်းမှ၊ ပိစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ကို သွားလာရမယ့် သဘေ်ာတွေနဲ့၊ ပိစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာဖက်ခြမ်းမှ အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာဖက်ကို သွားလာရမယ့်သဘေ်ာတွေဟာ၊ Dutch ဘာသာစကားနဲ့ Kaap Hoorn၊ လက်တင် Spanish ဘာသာစကားနဲ့ Cabo de Hornos လို့ခေါါတဲ့ တောင်အမေရိကတိုက်ကြီးတခုလုံးကိုပတ်ကာ၊ တိုက်ကြီးရဲ့အဆုံးဖက်မှ Cape Horn အငူကြီးကိုဖြတ်ပြီး၊ ခုတ်မောင်းစရာ မလိုတော့အတွက်၊ ခရီးရေမိုင်အကွာအဝေးများစွာ၊ စက်မောင်းဆီ ပမာဏများစွာနဲ့ ခရီးကြာချိန်များစွာတို့ကို၊ သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပနားမားတူးမြောင်းကို ဖြတ်သန်း ခုတ်မောင်းတဲ့အခါ ဖြတ်သန်းခ tolls ကို၊ 'PU/ UMS - Panama Canal Universal Measurement System' ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာရဲ့ စုစုပေါင်းထုထည် total volume အပေါါမှာ အခြေခံကာ တွက်ယူတယ်လို့ ယေဘုယျအနေနဲ့ပြောနိုင်ပြီး၊ (၁) PU/ UMS Net ယူနစ်ဟာ (၁၀၀) ကုဗပေနဲ့ ညီမျှတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ PU/ UMS Net ယူနစ်ကိုတွက်ယူရာမှာ၊ သဘေ်ာတစီးလုံးရဲ့ ထုထည် volume ကို တိုင်းတာပြီး၊ အလေးချိန် weight ဖွဲ့ကာ သတ်မှတ်ထားတဲ့၊ 'GRT' ဆိုတဲ့ gross register tonnage ပမာဏအပေါါမှာအခြေခံပါတယ်။
ကုန်သေတ္ထာတင် container သဘေ်ာတွေကိုတော့ TEU ဆိုတဲ့ တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကုန်သေတ္ထာအရည်အတွက် twenty-foot equivalent units အပေါါမှာ အခြေခံကာ တွက်ယူပါတယ်။ ပေ (၂၀) ကုန်သေတ္ထာတလုံးရဲ့ အတိုင်းအတာဟာ၊ အလျှား (၆. ၁) မီတာ၊ အနံ (၂. ၄၄) မီတာနဲ့ အမြင့် (၂. ၆) မီတာရှိပြီး၊ (၁) TEU လို့သတ်မှတ်ကာ (၁) TEU ကို အမေရိကန်ဒေါါလာ (၇၂) ဒေါါလာနှုံးဖြင့်ကောက်ခံပါတယ်။ အလျှား LOA, ဗျက် breath, ရေစူး draft နဲ့ air draft တို့ကို အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ ပနားမားတူးမြောင်း အတွင်း၊ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ "Panamax" လို့ခေါါတဲ့ ကုန်သေတ္ထာတင် container သဘေ်ာတစီးဟာ TEU ပမာဏ (၄၄၀၀) ခန့်အထိ၊ တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Panamax အရွယ်အစား ကုန်သေတ္ထာတင် container သဘေ်ာတစီး ဟာ၊ အလျှား LOA (၂၈၉. ၅၆) မီတာ, ဗျက် breath (၃၂. ၃၁) မီတာ, ရေစူး draft (၁၂. ၀၄) မီတာနဲ့ air draft (၅၇. ၉၁) မီတာ အတိုင်းအတာပမာဏရှိပါတယ်။ air draft ဆိုတာကတော့ သဘေ်ာရဲ့ water line မှ သဘေ်ာရဲ့ အမြင့်ဆုံး vessel's highest point နေရာအထိ၊ အတိုင်းအတာ အကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှာပြီးစီးမယ့်၊ တူးမြောင်းအသစ်မှာတော့ TEU (၁၂၀၀၀) တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကုန်သေတ္ထာတင် Super panamax သဘေ်ာကြီးတွေ ဖြတ်သန်း ခုတ်မောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
"close chock" အကြောင်းကိုပြန်ဆက်ပါဦးမယ်။ သဘေ်ာတွေမှာ mooring နဲ့ towing အတွက် အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေဟာ close chock အတွင်းမှ ဖြတ်သန်းသွားပါတယ်။ close chock အပေါါသက်ရောက်မယ့် load position ဟာ၊ chock ရဲ့ အပြင်ဖက် outboard မှာ၊ အလျှား horizontal ± 90° အနေအထားဖြင့် သက်ရောက်ပြီး၊ ဒေါင်လိုက် vertical အပေါါ up 30° အောက် down 90° အနေအထားဖြင့် သက်ရောက်နေပါတယ်။ chock ရဲ့ အတွင်းဖက် inboard မှာတော့ အလျှား horizontal ± 90° အနေအထားဖြင့် သက်ရောက်ပြီး၊ ဒေါင်လိုက် vertical ±30° အနေအထားဖြင့် သက်ရောက်နေပါတယ်။ geometric factor ဆိုတဲ့ design တန်ဖိုး (GF) ဟာ '2' ဖြစ်ပြီး၊ design load ပမာဏအနေနဲ့ "DBL = MBL x GF" ဆိုတဲ့၊ ပုံသေနည်းအပေါါမှာပဲ အခြေခံထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် stress limit ကိုလည်း၊ "≤ 85 % SMYS" ဆိုပြီး၊ တွက်ချက်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ close chock တွေမှာလည်း၊ အသုံးပြုမယ့် mooring rope ရဲ့ MBL တန်ဖိုးအတိုင်း၊ SWL ပမာဏကိုရေးသား သတ်မှတ်ရပါတယ်။ close chock ကို panama chock လို့ခေါါရတာကတော့ panama တူးမြောင်းမှ locks တွေအတွင်း၊ အဝင်အထွက်ပြုလုပ်ရာမှာ၊ အသုံးပြုတဲ့ wire တွေကို close chock အတွင်းမှ ဖြတ်သန်း ချည်နှောင်ရတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
GF =2Sin (θ/ 2)
θ = wrap angle
Fig. Geometric factors
mooring နဲ့ towing arrangement ပိုင်းဆိုင်ရာ equipments တွေအတွက်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ့် test load ပမာဏကို၊ စမ်းသတ်ရာမှာ geometric factors ဆိုတဲ့ 'GF' တန်ဖိုးအပေါါ အခြေခံပြီး၊ တွက်ချက်ရပါတယ်။ geometric factors ဟာ mooring နဲ့ towing အတွက်အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေ တနည်းအားဖြင့် line တွေနဲ့ mooring နဲ့ towing fitting တွေရဲ့ ထိတွေ့မှု contact ကို၊ ဂဲသြမေတြီသဘောအရ၊ တွက်ချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ mooring နဲ့ towing fitting တွေကြားမှာ အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေ တနည်းအားဖြင့် line တွေဟာ ဒေါင့်ဒီဂရီ angle တန်ဖိုးတခုဖြင့်၊ ထိတွေ့ဖြတ်သန်းသွားပြီး၊ wrap angle 'θ ' လို့ခေါါပါတယ်။ wrap angle ရဲ့တန်ဖိုးပမာဏဟာ 180° ရှိတဲ့အခါ၊ geometric factors တန်ဖိုးကို '2' အထိရရှိနိုင်ပြီး၊ wrap angle ရဲ့တန်ဖိုးပမာဏ ငယ်တဲ့အခါ geometric factors တန်ဖိုးလည်း၊ လျှော့ကျသွားပါတယ်။
"mooring roller" ဆိုတာကတော့ mooring နဲ့ towing အတွက်အသုံးပြုမယ့် rope တွေနဲ့ wire တွေ အလွယ်တကူရွှေ့လျှားလှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့၊ အထောက်အကူပေးတဲ့ mooring နဲ့ towing arrangement ပိုင်းဆိုင်ရာ equipments တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ mooring rollers တွေကို button-roller chocks နဲ့ pedestal fairlead roller ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. Button-roller chock
Fig. Pedestal fairlead roller
Reference & image credit to : http://en.wikipedia.org/, http://www.marinewiki.org/, http://gmgsystems.com/, http://www.schoellhorn-albrecht.com/, http://www.anselljones.com/, http://www.alibaba.com/, http://www.xyship.com, http://www.hiwtc.com, Mooring Equipment Guide Line,3rd Edition, ISBN 978 1 905331 321, OCIMF
Posted by ကိုထွန်း at 00:09 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 01:032comments: